Inona ny tetikady SEO tsara indrindra ho an'ny fifamoivoizana bebe kokoa?
Ireto misy soso-kevitra momba ny SEO ampiasaina ho an'ny fampitomboana ny fifamoivoizana sy ny fihenam-bidy. Ataovy azo antoka ny mijery ireto dingana enina ireto etsy ambany:
Fampahalalana ny mpampiasa fianarana
Fanadinana momba ny Optimization Search Engine amin'ny endrika ara-teknika indrindra. Eny, ny tanjona voalohany amin'ny liona anjara amin'ny tetik'ady SEO dia mahatsara ny fankasitrahana amin'ny robots fikarohana. Mandritra izany fotoana izany, ny fanatsarana ny fikaroham-bahaolana dia mahakasika ny filàn'ny mpihaino anao vahaolana tena ilaina; Midika fotsiny hoe mitady izay tadiavin'ny olona aho, ary manome azy ireo ny votoatiny. Noho izany, tsara kokoa ny fahafantaranao ny mpihaino anao, ny fahatsaran'ny mpampiasa mihoatra noho izay azonao atolotra. Ary izany dia tokony hitarika amin'ny laharana ambony ao amin'ny SERP - wood and metal outdoor table. Ny fomba tsotra indrindra hiatrehana izany dia miresaka mivantana amin'ireo mpitsidika anao, ary manome soso-kevitra amin'ny valim-panontaniana tena matetika amin'ny lohahevitra manan-danja aho, miampy ireo mpampiasa hafa manome vahaolana amin'izany. Ankoatra izany, hevitra tsara dia tsara ny handikana -paka ny sasany amin'ireo fanontaniana fototra hampiasana azy mivantana ho an'ireo lohatenin'ny bilaoginao.
Asa amin'ny alàlan'ny pejy
Amin'ny ankapobeny, rehefa aseho ny rohy ao amin'ny lisitry ny SERP , nivezivezy amin'ny tranokalan'ny tranokala na ny bilaogy fanohanana ny olona. Fa raha miatrika tetikasa ara-barotra ianao, ohatra, amin'ny fivarotana an-tserasera, dia tsara kokoa ny manana pejy iray tsy manam-paharoa sy tsara indrindra mba hahazoana mivarotra tsaratsara kokoa na mpanaraka bebe kokoa. Ny famoronana pejy iray mitongilana dia midika hoe manana tranonkala iray voatokana amin'ny lohahevitra manokana. Raha ny tanjon'ny tetikasa SEO, dia manoro hevitra aho eto manao ny dingana rehetra atao amin'ny fanatsarana rehetra. Voalohany indrindra, alohan'ny hanombohanao hanangana pejy fanentanana, mila mifidy fehezanteny lavaliny ianao. Amin'izany fomba izany, dia ambarao ny lohateniny sy ny famaritana ny meta. Asio pejy 2 milifitra farafahakeliny ny pejy tarihanao, satria toerana mahatsikaiky ho an'ny laharana ambony amin'ny valin'ny fikarohana Google izany.Aza misalasala manangona vola be ao anaty tranonkala matihanina. Farany, miezaha hanana fijoroana vavolombelona ho an'ny pejy mitazona anao ary mankafy ny mijanona eo amin'ny seza.
Resadresaka ny votoatinao
Ny tetikadin'ny SEO tsara ho an'ny votoaty dia mifototra amin'ny hevitra tokana - tantara dia mpanjaka. Eny, matoky aho eto, satria hevitra tena izy tokoa ny miasa mafy amin'ny votoatinao mba hanatontosana asa soratra tsara indrindra amin'ny traikefa mpampiasa mahomby. Na izany aza dia mety ho asa mahagaga sy maharitra. Raha tokony ho izany dia manolotra soso-kevitra ho an'ny tetikasa SEO kokoa ho an'ny asa soratranao. Ampiasao fotsiny ny votoaty mitovy endrika amin'ny endrika isan-karazany, ohatra, mba hampisehoana amin'ny fampiasana fitaovana mahomby sy azo ampiasaina. Midika izany fa afaka mametraka mora foana ny lahatsoratry ny blôginao ianao (farafaharatsiny ny ampahany) amin'ny lahatsarim-peo mahaliana, fampisehoana mampientanentana, podcasts tsara, ary ny infographics, na ireo fitaovana maimaim-poana amin'ny endrika PDF. Ho an'ny vokatra faran'izay be indrindra, ataovy toy izany ny anton-javatra mahasoa toy izany mba hahazoana rohy sy fifamoivoizana bebe kokoa. Tsy hanenenanao mihitsy ny handany fotoana.